चक्रपथ रेल चलाउन चीनियाँ कम्पनिले पायो यस्तो जिम्मा, ६ महिनामा अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्झौता ! || सुनौलो नेपाल
चक्रपथ रेल चलाउन चीनियाँ कम्पनिले पायो यस्तो जिम्मा, ६ महिनामा अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्झौता !
काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले चक्रपथमा मोनो रेल सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययन जिम्मा चीनको चाइना रेल वे २५ औं ब्यूरो ग्रुप कम्पनीलाई दिएका छन्। शुक्रबार भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय सभा गृहमा काठमाडौं महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र रेल वेका महाप्रवन्धक लि होङ्गकीले अध्ययन सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
यो सम्झौतासँगै चक्रपथमा रेल वे बनाउने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीले पाएको हो। चक्रपथमा मनोरेल सञ्चालन सम्बन्धी गरिएको सम्झौता कार्यक्रममा ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ, महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव कोइरालालगायत उपस्थित थिए। उपत्यकाको चक्रपथ काठमाडौं र ललितपुरमा रहेको छ।
महानगरले मोनोरेल सञ्चालन सम्बन्धी प्रकाशन गरेको आशय पत्रमा रेल वे ग्रुपले वैशाख २० गते महानगरमा इच्छापत्र बुझाएको थियो। सोही अनुसार शुक्रबार सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार— रेल वे कम्पनीले चक्रपथमा मोनो रेल चलाउन आर्थिक, प्राविधिक तथा दिगोपना जस्ता पक्षमा अध्ययन गर्ने छ। चिनियाँ कम्पनीले छ महिनामा अध्ययनको निष्कर्ष निकालेर विकल्पसति सिफारिस गर्ने छ।
सम्झौता समारोहमा बोल्दै, महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नै पालामा मोनोेरेल सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनताए । ‘मोनो रेल चलाउँछौं भनेकै एक बर्ष भइसक्यो । विधि मिलेपछि काम गर्ने बाटो खुल्छ । काम थालनी भएपछि रेल सञ्चालन हुन समय लाग्दैन, हामी त्यही दिशामा लक्षित छौं’, मेयर शाक्यले भने ।
कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले, आफू महानगरबासीलाई सरल जीवन यापन गर्ने सुविधाको, सुन्दर उपहार दिन लागि रहेको बताए । अहिलेको चक्रपथमध्ये १० किलोमिटर खण्ड आफ्नो भूगोलमा रहेको जनाउँदै मेयर महर्जनले यस क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक वातावरण तयार पार्न आफू तयार रहेको बताए ।
सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि होङ्गकीले तोकेको समयका काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाए । सम्झौता अनुसार पहिलो महिनामै अध्ययनको आधार तयार पर्ने छ ६ महिनामा अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी सम्झौता भएको छ ।